Fisorohana ny lozam-pifamoivoizana : Handray fepetra ny ATT -
AccueilSongandinaFisorohana ny lozam-pifamoivoizana : Handray fepetra ny ATT
Fisorohana ny lozam-pifamoivoizana : Handray fepetra ny ATT
19/07/2018 admintriatra Songandina 0
Manao tohivakana ny lozam-pifamoivoizana tato ho ato. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ny faritra, indrindra eny amin’ny lalam-pirenena, izay hamoizina ain’olona ampolony maro. Vokatry ny tsy fitandremana eo amin’ny mpamilin’ny fiara matetika no tena antom-pisian’izy ireny, ankoatra ny olana ara-teknina miseho tampoka eny am-pandehanana eny. Manoloana io lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga io, dia hisy ny fepetra horaisina antokon-draharaha an-tanety na ny ATT ho fisorohana izany loza izany. Tokony hanantona ny Att ireo mpandeha, indrindra ireo mikarakara dia iombonana amin’izao vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra izao. Fa eo ihany koa amin’ny fisian’ny JMJ izay tanterahina an’i Mahajanga tsy ho ela satria ho betsaka tokoa ny fiara mifamezivezy amin’io fotoana io.
“Misy fepetra horaisina, indrindra amin’izao vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra izao. Eto aho dia miangavy sy manao antso avo ireo mpiala sasatra, indrindra ireo mandeha maro, indrindra amin’ny fisian’ny Jmj any Mahajanga io. Manantona ny Att akaiky anareo mba hisian’ny fandaminana. Satria misy ny fiara tsy tokony ho any Mahajanga, ary mbola tsy tany na indray mandeha fa taksibe eo an-tanàna no alefa ka lasa mampisy lozam-pifamoivoizana. Marihina fa efa misy ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana handaminana izany rehetra izany. Ho fisorohana ny loza mety hitranga izay hatrany, dia hisy koa ny fanabeazana omena ireo mpitatitra sy ny mpandeha hanatsarana sy hanenana ny lozam-pifamoivoizana”, hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Att vaovao, Kolonely Reribaky Jeannot.
Mahakasika ny fitaterana izay hatrany, dia nilaza ihany koa ity tale jeneraly ity fa mbola mitohy hatrany ny fanampiana ara-bola ireo mpitatitra eto an-drenivohitra, ary mba ho famahana ny olan’izy ireo ihany koa, dia hisy ny fifampidinihana atao. Satria ny tanjona dia hananana fitaterana mifandraika amin’ny vanim-potoana iainana ankehitriny, araka ny fanamarihany hatrany. “Fitaterana moderina, fitaterana ao anatin’ny fiarovana tanteraka sy filaminana. Ho famahana ny olan’ny mpitatitra izay indrindra, ny fandaminana voalohany dia ny fifanantonana sy fifampiresahana hijerena ny tena olana sy hamahana azy”, hoy hatrany ity tale jeneraly vaovao ity. Tontosa omaly moa ny fifamindram-pahefana teo amin’ny tale jeneralin’ny Att teo aloha, jeneraly Rakotondrazaka Andry sy Kolonely Reribaky Jeannot, tale jeneraly vaovao.
Ho mariky ny fiverenan’ny fiaraha-miasan’ny fanjakana Alemana sy Malagasy, dia nanome vola 60 tapitrisa Euros ho an’ny fanjakana malagasy ny fanjakana Alemana. Nandritra ny dinika ara-politika teo amin’ny solontenan’ny firenena roa tonta no nanaovana sonia ...Tohiny